१८ बर्षकि नर्स छोरीलाई सकेको हो भन्दै बुबा आए मिडियामा ,४ जन केटाहरले बोकेर लगेछन, कसरि भिज्यो बिस्तार ? (भिडियो) – Classic Khabar
June 13, 2021 239
झापाको दमकस्थित लाइफलाइन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रेडियोलोजी तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत एक छात्राको रहस्यमय मृत्यु भएको छ । दमक नगरपालिका–५ स्थित एक घरमा कोठा भाडामा लिएर अध्ययन गर्दै आएकी इलामकी सेजला कोइरालाको बुधबार साँझ रहस्यमय मृत्यु भएको हो । घटनास्थलमा केही शंकास्पद वस्तु पनि फेला परेका छन् । उनका आफन्तहरुले घटना रहस्यमय भएको बताएका छन् । भक्तवहादुर कोइराला सेजलको ठूलोवुवाले ५ वजे घटना भएको र ८ वजे प्रशासनले जानकारी पाएको भन्ने बारेमा आफुहरुले ९ वजे मात्र थाहा पाएको बताएका छन् ।
फुले सेजलालाई एकै पटक अस्पतालमा फेला पारेको बताएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज कार्कीका अनुसार सेजलाको शव धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षणका लागि पठाइएको छ । साथै प्रहरीले मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान भै रहेको जनाएको छ । सेजलालाई बेलुकी करिब ५ः०० बजे साथीले मोबाइलमा सम्पर्क गरेका थिए । त्यसक्रममा मोबाइल नउठेपछि साथी कोठामा पुग्दा उनलाई शौचालयको कम्बोर्टमा बे(होस अवस्थामा भेटेको प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्कीले जानकारी दिए ।
उनलाई तत्कालै लाइफलाइन अस्पताल पुर्याइए पनि बचाउन नसकिएको सेजलाका साथीहरुले बताएका छन् । घटनालगत्तै सेजलाका अभिभावक इलामबाट दमक पुगेका थिए । सेजलाको मृत्यु रहस्यमय भएको भन्दै निष्पक्ष छानविन गर्न प्रहरीमा आफन्तले जाहेरी दिएका छन् । प्रहरीले भने तत्काल मृत्युको कारण थाहा पाउन परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ । सेजलाको शव प्रहरीले नभएर अन्य केही युवाहरुले अस्पताल लगेको आफुहरुले जानकारी पाएको भन्दै युवतीको ठूलोवुवाले घटना रहस्यम भएको बताएका छन् ।
Prevत्यो दिन सबिताको परिवार माइतिसँग आखिर किन संपर्कमा आएका थिएनन ? (भिडियो हेर्नुहोस)